Dubai mankany Zagreb tsy mijanona ao Emirates amin'izao fotoana izao
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Dubai mankany Zagreb tsy mijanona ao Emirates amin'izao fotoana izao
Jona 1, 2017
Ny sidina voalohany an'ny Emirates Boeing 777-300ER avy any Dubai dia nipetraka tany Zagreb tamina fiarahabana tafondro rano sy mpandihy nentim-paharazana Kroaty, miaraka amin'ny mpandeha 350 mahery ao anatiny.
Nandeha tamin'ny sidina EK129 androany i Thierry Antinori, filoha lefitra mpanatanteraka ao Emirates ary Lehiben'ny mpiandraikitra; Thierry Aucoc, filoha lefitra zon'ny Emirates, Operations ara-barotra (Europe & Fed Rosiana); Gari Cappelli, Minisitry ny fizahantany, Repoblikan'i Kroasia; Ny Andriamatoa Ali Al Ahmed, masoivohon'i UAE any Kroasia ary vondron'olona mpiara-miasa sy mpitarika orinasa avy any Dubai, Hong Kong, India ary Sina.
Maneho ny haavon'ny fahalianana amin'ny làlana vaovao sy ny fanamorana ny fifandraisana miditra mankany Zagreb, ny sidina androany dia nitondra mpandeha ara-barotra avy amin'ny firenena 16 mahery ao amin'ny tambajotran'ny Emirates, anisan'izany i Taiwan, Australia, India, the United Arab Emirates, Korea, China, Japan , Singapore ary Afrika atsimo.
Tao amin'ny tokotanin'ny sidina B777-300ER niasa ny sidina voalohany, dia ny Kapiteny Rashid Al Ismaili avy amin'ny Emira Arabo Mitambatra sy ny tompon'andraikitra voalohany teraka tany Kroaty Marin Zdrilic. Emirates dia mampiasa teratany Kroaty mihoatra ny 250 - toy ny mpanamory fiaramanidina, ekipa kabine ary ao amin'ny biraon'ny tapakila ao amin'ny Hotel Westin any Zagreb.
Rehefa tonga teo amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Franjo Tuđman, ny solontena dia noraisin'i Jacques Feron, CEO an'ny MZLZ dd (seranam-piaramanidina Franjo Tuđman) sy ny seranam-piaramanidina zokiny ary ny tompon'andraikitra eo an-toerana.
Fandraisana fandraisana olona no natao tao amin'ny terminal vaovao misy ny seranam-piaramanidina, narahina valandresaka ho an'ny mpanao gazety, lanonana fifanakalozana fanomezana ary fanapahana mofomamy. Taorian'ny fombafomba ofisialy, ny minisitry ny governemanta, ny VIP, ny mpanatanteraka seranam-piaramanidina, ny mpiara-miombon'antoka ary ny haino aman-jery dia nankafy ny fitsidihana static an'ny fiaramanidina B777-300 ER an'ny Emirates. Ny fitsangatsanganana dia nanome vahana ny vahiny hahita ny zava-bita mahavariana nomen'i Emirates an'ireo kabinetra telo ho an'ny mpandeha ao anatiny, ao anatin'izany ny marika famantarana ny First Class, izay hany tolotra First Class amin'ny sidina iraisam-pirenena mankany Zagreb.
"Zava-dehibe iray lehibe ho an'ny Emirates ny anio raha mampiditra hetsika feno ao an-tsena izahay ary manamafy ny fanoloran-tenantsika amin'ny fitomboan'ny varotra sy ny fizahan-tany eo amin'ny Dubai sy Kroasia. Hatramin'ny nananganana ny fisianay ara-barotra eo amin'ny tsena tamin'ny taona 2003 dia niara-niasa tamin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny varotra sy fizahan-tany izahay hanatanterahana an'io andro io. Misaotra an'ireo mpiara-miombon'antoka ary indrindra ny Minisiteran'ny Fizahan-tany sy ny seranam-piaramanidina Franjo Tuđman izahay tamin'ny fanohanany amin'ny fanomanana ny fampidirana ny sidina isan'andro sy ny hetsika anio, "hoy i Thierry Antinori, filoha lefitra mpanatanteraka ao Emirates.
Manantena izahay fa hanohy ny fiaraha-miasa mahomby noforoninay tato anatin'ny volana sy taona ho avy, ”hoy hatrany izy.
“Faly be aho fa afaka mandray ny Emirates any Zagreb amin'ny anaran'ny Governemanta sy ny Ministeran'ny fizahan-tany ao amin'ny Repoblikan'i Kroasia. Mino izahay fa ity sidina mivantana isan'andro eo anelanelan'i Dubai sy Zagreb ity dia hitondra tombony betsaka ho an'ny firenentsika. Izy io dia ahafahana mampitombo ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny firenena ary hisy fiatraikany tsara amin'ny fizahantany. Miaraka amin'ny sidina isan'andro an'ny Emirates dia tsy ho afovoan'i Eropa atsimo atsinanana mifandray amin'i Moyen Orient i Kroasia - ny faritra malaza indrindra manerantany amin'ny resaka fitomboan'ny indostria, fa koa hifandray amin'ny firenena maro hafa toa an'i Shina, India, Aostralia. , Nouvelle-Zélande, Korea atsimo, Japon, Taiwan ", hoy ny minisitry ny fizahan-tany an'ny Repoblikan'i Kroasia Gari Cappelli, ary nilaza fa hanampy amin'ny fanitarana ny fizahan-tany ity fizahan-tany ity.
Ny sidina isan'andro dia hanokatra ny fahazoana mankany amin'ny toerana 80 manerana izao tontolo izao ao amin'ny tambajotran'i Emirates manerantany ho an'ny mpandeha Kroaty sy ny mifamadika amin'izany. Ny fitsangatsanganana avy any Shanghai, Beijing, Bangkok ary Kuala Lumpur, na Sydney sy Melbourne dia azo tanterahina miaraka amina fiatoana tokana ao amin'ny hub Dubai-class Dubai.
"Tena reharehanay ny iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, Emirates, nifidy an'i Zagreb ho tanjon'izy ireo vaovao any amin'ity faritra Eropa ity ary mbola zava-dehibe kokoa aza izany raha raisina am-piheverana fa avy aorian'ny fisokafan'ny terminal vaovao misy mpandeha izay manome ny avo lenta ny serivisy ho an'ny mpandeha rehetra ary mameno ny serivisy ambony natolotry ny Emirates ", hoy i Jacques Feron, Tale Jeneralin'ny MZLZ dd, Concessionaire an'ny Franjo Tuđman Airport.
Ny serivisy dia iasan'ny Emirates Boeing 777-300ER miaraka amina tranokely misy kilasy telo, manome efitrano tsy miankina valo ao amin'ny Kilasy Voalohany, misy varavarana misosa mandeha ho azy ho an'ny fiainana manokana, bar kely ho an'ny tena ary seza mirona tanteraka, seza fisaka 42 ao amin'ny Class Business ary seza malalaka 310 amin'ny Toekarena.
Toy ny sidina Emirates rehetra, ny mpandeha mandeha amin'ny serivisy Zagreb dia afaka manararaotra ny famindram-pahefana malala-tanana an'ny Emirates hatramin'ny 35kg amin'ny Class Economy ary 40kg amin'ny Class Business, ary 50kg amin'ny Kilasy Voalohany.
Ao anaty sambo, ny mpandeha dia afaka mahita izany ranomandry Digital Widescreen, manolotra fantsona audio sy sary an-tsary maherin'ny 2,500 ao anatin'izany ny sarimihetsika, fandaharana amin'ny fahitalavitra, mozika, boky audio ary lalao vaovao. Ny mpanjifa dia afaka mankafy ny fandraisam-bahiny malaza eto an-tsambo avy amin'ny ekipan'ny kabinetran'ny firenena maro any Emirates, ary koa ny lovia nomanina ho an'ny faritra misy zava-pisotro misy alikaola.
Ny serivisy voalohany tao Zagreb dia niasa ho EK129, niainga tao Dubai tamin'ny 08.15 maraina, tonga tao Zagreb tamin'ny 12.20 hariva. Niala tao Zagreb tamin'ny 15.35 hariva ny sidina, tonga tany Dubai tamin'ny 23.05 hariva.
Hilton Garden Inn Singapore Serangoon misokatra
Nankalaza ny faha-15 taona niorenany ny trano fandraisam-bahiny tao Corinto St.
Mandrara ny 'vaxholes', 'sarona' ary 'ondry' ny hotely Wacky UK
Vaovao momba ny dia any Koety
Kuwait dia mandrara ny olom-pirenena tsy vita vaksiny mba tsy hiala ny emirata
Vaovao momba ny dia any Greece
Misokatra indray ny trano fisakafoanana, fisotroana ary fisotroana kafe any Gresy taorian'ny fikatonan'ny COVID-6 19 volana